Fifidianana solombavambahoaka :: Hanasonia Dina alohan'ny fampielezan-kevitra ireo kandidà • AoRaha
Fifidianana solombavambahoaka Hanasonia Dina alohan’ny fampielezan-kevitra ireo kandidà
Fifidianana eken’ny rehetra no tanjona. Ilaina madio sy mangarahara ary manaraka ny lalàna ny dingana rehetra hatrany amin’ny fanambaràna ny valim-pifidianana. Mba hahatrarana ny tanjona no nahatonga ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) sy ny Komity mpiara-mamolavola, miisa iraika ambin’ny folo nampahafantatra ny fisian’ny « Toky Nomena » na Dina 29 mamaritra ny fitsipi-pitondran-tena mandritra ny fifidianana solombavambahoaka tokony hosoniavin’ireo kandidà, teny Ambatonakanga, omaly.
« Tsara ny tokony hanohizana ny ezaka efa natao tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo», hoy ny lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry. Hatramin’ny 5 mey, andro iray mialoha ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra, no hahafahan’ireo kandidà manasonia an’io Dina io. Manentana ireo kandidà telo sy valonjato ny komity hanasonia ny Dina. Tsy ny kandidà ihany fa ny olom-pirenena tsirairay mba handray ny andraikitra sy ho saro-piaro amin’ny safidiny sy ny asa hosahanin’ireo depiote.
Haparitaka manerana ny distrika sivy ambin’ny folo amby zato ny Dina hahafahan’ny kandidà mandinika azy sy manaiky azy. Hisy ny tatitra hatao amin’ny alalan’ny haino aman-jery sy gazety ary ny tambajotran-tserasera sosialy. “Noho ny tsy fahampian’ny lalàna mifehy ny fifidianana no tena antony hanaovana ny Dina”, hoy ny fiarahamonim-pirenena sy ny andrimpanjakana, mameno ity komity ity.
Serasera sy asan-gazety :: Teboka maro no hasiam-panovàna ao anatin’ilay lalàna teo aloha